Fifindràmonina · Avrily, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fifindràmonina · Avrily, 2012
Mey 2022 1 Lahatsoratra
Oktobra 2018 15 Lahatsoratra
Marsa 2018 6 Lahatsoratra
Febroary 2018 5 Lahatsoratra
Desambra 2017 11 Lahatsoratra
Novambra 2017 6 Lahatsoratra
Septambra 2017 9 Lahatsoratra
Aogositra 2017 17 Lahatsoratra
Jolay 2016 8 Lahatsoratra
Aogositra 2015 11 Lahatsoratra
Septambra 2014 3 Lahatsoratra
Novambra 2013 8 Lahatsoratra
Marsa 2013 3 Lahatsoratra
Marsa 2008 8 Lahatsoratra
Janoary 2008 10 Lahatsoratra
Novambra 2007 8 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Fifindràmonina tamin'ny Avrily, 2012
Kioba: Maneho Hevitra Momba Ny Famotsorana an'i Ferrer García Ireo Any Am-pielezana
Karaiba 30 Avrily 2012
Nafahana tao anatin'iny faran'ny herinandro iny ilay voafonja noho ny fnehoan-keviny , Jose Daniel Ferrer Garcia. Mitondra fanamarihana momba izay fivoaran-draharaha vao haingana izay ireo bilaogera any am-pielezana
Mpitsoa-ponenana: Media Sy Teknolojia An-tSerasera Hikarakaràna ny Mpitsoa-ponenana
Afrika Mainty 29 Avrily 2012
Fikambanana roa samihafa no mifantoka amin'ny tombontsoa sy ny vokatsoa azo avy amin'ny fampiasana ny Media sy ny teknolojia an-tserasera ho entina manampy ny mpitsoa-ponenana hanatsara ny fiainany.
Ekoatera: Vehivavy Sy Ankizivavy Mpitsoa-ponenana Mitodika Amin'ny Asa Fivarotan-tena
Amerika Latina 27 Avrily 2012
Ny Hetsika fanadihadiana an-dahatsarin'ny VJ mitondra ny lohateny hoe Mpitsoa-ponenana mitodika amin'ny asa Fivarotan-tena ao Ekoatora dia mijery ny zavatra iainan'ireo vehivavy Kolombiana maro tsy maintsy niampita sisintany ka nifindra monina any Ekoatora noho ny herisetra. Aminà tranga maro, noho ny tsy fahafahany mahazo asa ara-dalàna, mba hahafahana mivelona dia mitodika amin'ny asa fivarotan-tena ireo vehivavy maro sy ny zanany vavy.
Iran: Mamadika Ny Pejin'ny Fanavakavaham-bolokoditra Atao Amin'ny Afgana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 18 Avrily 2012
Naneho ny fahasorenany ny mpamahana bolongana raha nandre fa noraràn'ny manampahefana tsy hiditra ao amin'ny toera-pitsangatsanganana ny Afgana monina ao Ispahan, ao Iran nandritra ny fankalazana ny faha-13 andron'ny taombaovao Nowruz tamin'ny 1 Aprily 2012. Mahazatra ny olona ny mandeha mivoaka mitsangatsangana hanamarihana izany andro izany. Na dia nandà aza ny manampahefana iray...
Soeda: Mitsidika An'i Rinkeby, Ambany Tanàna Be Mpiavy Ao Stockholm
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Avrily 2012
Malaza noho ny fahamaroan'ny mpifindra monina ao aminy ny fokontanin'i Rinkeby ao Stockholm, Soeda. Mitantara ny fitsidihany io faritra io izay mba te-hijerijery izany faritra izany. Monina any Stockholm ny mpanao gazety sy bilaogera Yemenita Afrah Nasser. Nanoratra momba ny nitsidihany voalohany an'i Rinkeby izy tao amin'ny hafatra bilaogy tamin'ny 6 Avrily 2012....